Pituitary Luteinizing hormonina noho ny tsindrona (LH) - China Ningbo Faharoa hormonina
Pituitary Luteinizing hormonina noho ny tsindrona (LH)
Pituitarii Lutropinum Pro Injectione (LH) [Description] Izany vokatra dia fotsy na fotsy eny-maina Hivaingana-biriky na ny vovoka. [Andrakitra sy ny fampiasana] hormonina zava-mahadomelina. Noho ny fiaraha-miasa ny pituitary follicle-mandrisika hormonina, dia mety hampiroborobo ny farany maturation ny follicles, hitarika ny famokarana atodinaina, ny follicles matotra sy hitarika ny taranaka Corpus luteum. Izany no tena ampiasaina mba: 1. Mampandroso follicles mba matotra sy ovulate; 2. Mampandroso ny taranaka Functional Corpus leteum; 3. fanafodin'ny ny famokarana atodinaina, ...
Ity vokatra dia fotsy na fotsy eny-maina Hivaingana-biriky na ny vovoka.
[Andrakitra sy ny fampiasana]
Hormonina levitra. Noho ny fiaraha-miasa ny pituitary follicle-mandrisika hormonina, dia mety hampiroborobo ny farany maturation ny follicles, hitarika ny famokarana atodinaina, ny follicles matotra sy hitarika ny taranaka Corpus luteum.
Izany no tena ampiasaina mba: 1. Mampandroso follicles mba matotra sy ovulate;
2. Mampandroso ny taranaka Functional Corpus leteum;
3. fanafodin'ny ny famokarana atodinaina, tsy fahombiazan'ny (mahantra matotra ny follicles, nahemotra ny famokarana atodinaina,);
4. fanafodin'ny fahafatesana tany am-boalohany na ny fanalan-jaza ny fanjary tsaika vokatry ny hypoplasia ny Corpus luteum;
5. fanafodin'ny oestrum fohy loatra sy miverimberina ny vehivavy mpiompy biby;
6. fanafodin'ny follicle kista;
7. fanafodin'ny biby lahy amin'ny firaisana ara-nofo ambany fiara, boky sy ny tsirinain'ilay ombilahy kely tsy tsirinaina.
[ U olon-kendry sy ny levitra]
Rehefa nampidirany, dia aoka ho amin'ny tsy mamokatra voatsatso rano tsindrona na sterilized ranoka masiran'i rano.
I. Ny pplication ny C attle fandikana
1. Fitsaboana ny amin'ny toerana ovarian asa: intramuscular fampidirana 200IU ny FSH miampy 100IU ny LH; ny dosing dia miverimberina indray mandeha raha toa ka tsy mahomby.
2. Induction ny famokarana atodinaina,: intramuscular fampidirana 200-300IU ny LH nandritra ny ora maromaro manao firaisana, na manao firaisana alohan'ny afaka hampiroborobo ny famokarana atodinaina, sy hanatsarana ny tahan'ny vohoka.
3. Synchronization ny famokarana atodinaina,: intramuscular fampidirana 200IU ny LH nandritra ny estrus ny omby vavy rehefa avy notsaboina tamin'ny estrus synchronization afaka hampiroboroboana ny synchronization bebe kokoa ny famokarana atodinaina, sy hanatsarana ny tahan'ny vohoka rehefa estrus synchronization.
4. Super ny famokarana atodinaina,: intramuscular fampidirana 200IU ny LH 72 ora taorian'ny fitsaboana faran'izay ny famokarana atodinaina, dia afaka hampiroborobo ny maturation sy ny famokarana atodinaina, ny follicles sy hanatsarana ny vokatry ny Super ny famokarana atodinaina.
5. Fisakanana ilay afa-jaza: intramuscular fampidirana 200IU ny LH andro maromaro taorian'ny solon-insemination; mitohy fitantanana ny 2-3 andro misesy.
II. Ny hafa
1. Hampitomboina ny Super ny famokarana atodinaina, vokany eo amin'ny ondrivavy: intramuscular fampidirana 100-200IU ny LH 72 ora taorian'ny fitsaboana faran'izay ny famokarana atodinaina, dia afaka hampiroborobo ny maturation sy ny famokarana atodinaina, ny follicles ka hanao ny famokarana atodinaina, nampiarahina.
2. Intramuscular fampidirana 50-100IU ny LH ny ondrivavy, na rehefa manao firaisana mandritra ny 2-3 andro misesy dia afaka hanasitrana tany am-boalohany ny fahafatesana na ny fanalan-jaza ny fanjary tsaika zatra vokatry ny hypoplasia ny Corpus luteum.
3. fanafodin'ny biby lahy amin'ny firaisana ara-nofo ambany fiara, mahantra ny tsirinain'ilay ombilahy tsara, cryptorchidism, sy levitra, sns
Izany vokatra ankapobeny dia tsy voaomana ho vahaolana ho an'ny fitehirizana raha ny deactivation.
Ny levitra ho avo roa heny noho ny fitsaboana ny ovarian kista.
Shaded sy airtight; notehirizina ambany ny mari-pana ny 20 ℃.
[Term ny mampanankery] 2 taona
[Ny famoizana-potoana] Tsy misy fepetra
Previous: Pituitary Follicle surrénales noho ny tsindrona (FSH)
Manaraka: Posterior Pituitary tsindrona
Pituitary Follicle surrénales for Inje ...
Adrenaline hydrochloride tsindrona
Viatamin AD for tsindrona
Oxytocin tsindrona (Pitocin)
Chorionique for tsindrona (GnRH)